The Ab Presents Nepal » रबि लामिछानेको पक्षमा आज पनि देशभरी आन्दोलनको घोषणा,१ लाख सेयर पुराउ !
रबि लामिछानेको पक्षमा आज पनि देशभरी आन्दोलनको घोषणा,१ लाख सेयर पुराउ !
काठमाडौँ -: प्रहरीले टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछानेसहित तीन जनालाई आज पक्राउ गरेको छ । नुवाकोटका पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको मृत्यु प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । पक्राउ पर्नेमा टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता लामिछानेसहित युवराज कँडेल र ओखलढुङ्गाकी अस्मिता कार्की’ छन् ।
बिहीबार मात्रै सार्वजनिक भएको उक्त भिडियोका आधारमा अनुसन्धानका लागि उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । भिडियो प्रहरीले डिजिटल परीक्षणसमेत गरिसकेको छ । पुडासैनी साउन २० गते चितवनको नारायणगढस्थित होटल कङ्गारुको कोठाभित्र मृत भेटिएका थिए । प्रहरीले पक्राउ गरेपछि रमेश प्रसाईले रबि लामिछाने पक्राउ परेपछि आक्रोशित हुँदै सारा नेपालीलाइ भने अब के गर्ने’ ?
यो हामी सबैको परिक्षा हो अब रवि लामिछानेप्रति षड्यन्त्र भइरहेको छ । उहाँको न्यायका लागि भोली चितवन जिल्ला अदालत जाऊँ भन्दै अपिल गरेका छन् । साथै फेसबकुमा धेरैले लेखेका छन् । आन्दोलनका लागि तयार हौँ । पोखराका अशोक ओझा त ११ बजे पोखरा चिप्लेढुंगामा भेला हुन सबैलाई अपिल गर्दछन् ।’